Itekhnoloji yoBomi boBomi: Akukho Bootstrap
NgoMvulo, Februwari 28, 2011 NgoMvulo, Matshi 7, 2011 UNick Carter
Ndingathanda ukuphelisa amarhe ambalwa. Andiphikisani nayo oongxowankulu abangxowankulu. Andicingi ukuba abatyali mali beengelosi ziidemon. Andiqondi nokuba ucinga ukuba wonke umntu kufuneka okanye abe "bootstrap" ishishini labo ngempumelelo. Ukukungqina oku, ndingathanda ukukuxelela ngesizathu se- # 1 sokuba wena namaqabane akho nidinge ukuqala ngokungenazintloni ukukhuthaza imbono yeshishini elibhakwe kwisiqingatha kuye nakubani na onemali anokuyigcina: Half-Life.
Kanye njengokuba igama "uqalo" liye lafana neli mali, ke ngoku ikwayinto efanayo ne "techie." Mhlawumbi kukho unxibelelwano apho. Imvumelwano ngokubanzi kukuba ukuqala okutsha phantse kuhlala kusisixhobo sewebhu, amava entlalontle, okanye ikhompyuter elingana nentloko yesikhonkwane. Ngoku, ayisoloko iyinyani leyo. Kodwa, ukuba bekunjalo, kuya kufuneka ndizitshise okwam incwadi kwaye bavume ukuba lonke uqalo (ngokubona indlela abayiyo [ngokuqikelela] yonke into eqhutywa bubuchwephesha) kufuneka bapolishe isandi sabo kwii-VC kwaye baxakeke.
Itekhnoloji yintsimi ekhula ngokukhawuleza. Ndiyathemba ukuba le ngxelo ayothusi mntu. UMthetho kaMorey Isixelela ukuba itekhnoloji iphindaphindwe kabini kwiminyaka emi-2 (nokuba kuthetha ntoni). Kodwa isantya sokuqalisa ekufuneka sinoxanduva malunga naso ayisiso isantya apho abaphuculi baphucula khona okanye iindleko ze-RAM ziyehla. Isantya esiqala ngokunxulumene netekhnoloji ekufuneka sikhathazekile sisantya apho umbono wabo uphulukana nobutsha babo. Sisantya sobomi bokuqalisa.
Ukuba usebenzisa imveliso, uyacaphuka, kwaye ucinga indlela onokuyenza ngcono ngayo, kukho inqanaba ekufuneka ulichazile: Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuyakha le mveliso, ndiye kwintengiso, emva koko ndakhe ubunzima obunzima? Emva koko, zibuze ukuba ngaba umntu uya kukhathalela ngelo xesha. Ngokukrakra! Ngaba umntu uya kukhathalela ukuba ubufezekisile ubugcisa bokucoca entloko i-VHS ukuba kungakuthatha iminyaka elishumi ukufumana isabelo sentengiso? Ngaba umntu uya kukhathalela i-headset yakho ye-wire-headset emva kokuba izinyo eziluhlaza zibetha eziqhelekileyo? Obu buchwephesha aboyiswanga, hayi ngabo bakhuphisana nabo, kodwa ngesiqingatha sobomi. Kumdyarho wabantu wow, baphulukana.
Xa kuziwa kwitekhnoloji yokuthengisa, ndicinga ukuba ndingatsho ngokukhuselekileyo ukuba "intlalontle" lilizwi elithile le-buzz kule mihla. Kwaye intlalo ikhawuleza ngokungaboni. Utshintsho kwezentlalo mihla le. Kwaye, ngaphandle kweziganeko "zentsholongwane" ezisasaza izimvo, iindleko zentlalo mali, nazo. Intlalontle ayikhululekanga. Awunakucwangcisa ukwenza imeko yentlalo ngaphandle kokutyhala… hayi ngokukhawuleza. Isantya, ngapha koko, ligama lomdlalo.
Ke, awukwazi nini I-bootstrap yiyo? Ukuba imveliso yakho yakhiwe kwiqonga loluntu (i-Twitter okanye i-Facebook) fumana inkxaso-mali. Ukuba itekhnoloji yakho ixhomekeke kubuthathaka bobunye ubuchwephesha (njengokucoca iintloko okanye iiseti ezingenazandla ezingenazintambo) fumana inkxaso-mali. Ukuba woyika ukuxelela nabani na malunga noluvo lwakho (kubandakanywa abatyali mali) kuba usoyika ukuba bazokuyiba, emva koko ufumane inkxaso-mali. Qikelela, kuya kufuneka uxelele umntu kungekudala okanye kamva ukuze ufumane abathengi, kwaye ukuba ilungile ngenene loo nto, omnye umntu uya kuyikopa ayisebenzise VC ukukulandela ngokukhawuleza ukuya kwintengiso kunye nesantya esedlule kuwe kwisabelo sentengiso. Ukuba isantya sinokukubetha, kuya kufuneka ukhawuleze.
Ingqungquthela yoPhuculo lweMidiya yoLuntu ka-2011